Nye weebụsaịtị Gị ka Nyochaa Ntụkwasị Obi | Martech Zone
Nye weebụsaịtị Gị ka Nyochaa Ntụkwasị Obi
Tọzdee, Disemba 27, 2012 Friday, December 28, 2012 Douglas Karr
Ọtụtụ oge n'izu, m na-eme n'ofe weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ naanị iji jụọ ma ha bụ azụmaahịa, na-azụ ahịa ọ bụla, ma ọ bụ nwee ntụkwasị obi iji soro. Ndị ụlọ ọrụ na-etinye ego na ntanetị weebụ ma ha amaghị na saịtị ha nwere nwere ike ịbụ ihe ngosi na ha enweghị ntụkwasị obi.
Ntụkwasị obi bụ nnukwu ihe na ntụgharị. Have ga-amalite ịjụ onwe gị, nke ọtụtụ puku ndị mmadụ na-aga na weebụsaịtị anyị, kedu ka ha si ghara ịtụgharị? Ọ bụrụ na ntụkwasị obi bụ okwu ahụ, ịnwere ike ịme mgbanwe ole na ole na-eweta ụfọdụ nsonazụ dị egwu.
Nyochaa ntụkwasị obi:
mbọn - Mbinye aka na saịtị gị ga-enwe mmetụta dị ukwuu na ma ọ tụkwasịrị ya obi. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-adabere na logos mepụtara nke ọma, eserese ndị na-adabaghị, yana okike edeghị nke ọma. Ọ bụrụ na imepụta gị dị ka otu nde dollar, ọ ga-akpali ntụkwasị obi na ndị ọbịa gị. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe nkpuchi nke ihe osise na ihe osise Peeji kachasị ọhụrụ gị, atụla anya ọtụtụ.
AFỌ - have nwere ụbọchị ọ bụla na ibe obibi na nkịtị nkụnye ndị eji isi mee ma ọ bụ n'okpuru ndị na-adịghị ugbu a? A © 2009 bụ ihe akaebe doro anya na emelitebeghị saịtị weebụ n'ime afọ ole na ole, na-ahapụ onye ọbịa ahụ obi abụọ banyere ma ọ nọ n'ọrụ. Jide n'aka na ụbọchị niile edepụtara na ibe nke saịtị gị bụ nke na - adịbeghị anya - ntinye ederede, mmekọrịta mmekọrịta ikpeazụ, pịa kachasị ọhụrụ, na ụbọchị nwebisiinka!
Foto ahịa - Ọ bụ ezie na anyị na-eji foto ngwaahịa maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ahịa ọ bụla, anyị na-ezere iji foto foto ma ọ bụ ụdị nke ngwaahịa ngwaahịa anyị hụrụ na saịtị ndị ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ niile nọ na saịtị gị bụ otu ntutu ntutu isi nwere ntutu isi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ nwere na saịtị ha, enwere ike ịgaghị ewere gị dị ka akụ na-ekwenye ekwenye. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ ziri ezi, ọ dị oke ọnụ ịnwe oge ịse foto na ụlọ ọrụ gị ebe ị nwere ike ijikọ saịtị gị na ngwaahịa na foto.
Nọmba ekwentị - Ọ bụrụ na mụ na mmadụ ga-azụ ahịa, achọrọ m nọmba ekwentị ha. Mgbe m rutere na ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị ya, m na-agakarị na nke ọzọ. Ma ị zara ekwentị ma ọ bụ na ọ bụghị ya bụ ajụjụ… ọ bụ ma azụmahịa gị edepụtara nke ọma dịka azụmaahịa nwere nọmba ekwentị ya. Na ọnụ ọgụgụ ọnụ ọgụgụ ka mma.
Address - Inye adreesị azụmahịa nke anụ ahụ na-eme ka atụmanya gị mara na ị tinyela ego na azụmaahịa gị ma nwee ike ịchọta ya ngwa ngwa. Ndị ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n’otu oge na-ala azụ azụ ahịa… ọkachasị n’Intanet… ma ọ bụrụ na ha amaghị na ụlọ ọrụ nwere ahụ ike ebe. Na igbe UPS anaghị egbutu ya, ndo!
Profaili - have nwere foto nke ndị ọrụ gị, aha ha na ibu ọrụ ha na saịtị gị? Ọ bụrụ na ịmeghị, ọ ga-adọrọ uche ndị ọbịa gị, ha nwere ike ha agaghị azụ gị ahịa ebe ọ bụ na ha agaghị amata gị. Idebe foto profaịlụ dị ezigbo mkpa - inye ihu na profaịlụ ụlọ ọrụ gị.
Njikọ mmekọrịta - Yana ezigbo foto profaịlụ, ị nwere nkwukọrịta na-aga n'ihu na folks na Twitter na Facebook. Inwe netwọkụ mmekọrịta na-arụ ọrụ bụ nnukwu ụzọ iji hụ na ndị mmadụ hụrụ na azụmahịa gị kwesịrị ntụkwasị obi. Nzaghachi na ọrụ ndị na-adịbeghị anya na njikọ aka gị na isi bụ isi.
atumatu - atumatu ọha ma ọ bụ nkọwa ederede nke usoro ịkwụ ụgwọ, usoro nnyefe na mbupu na-atọ ntọala nke na-enye ndị ọbịa gị nghọta siri ike banyere azụmahịa gị. Nke a bụ ihe kpatara saịtị ecommerce na-etinye mgbe niile usoro nkwụghachi na ụgwọ mbupu n'ihu. Ikwesiri, kwa!
Asambodo na ndi otu - you nọ na ndị ọzọ ọ bụla, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ziri ezi, jide asambodo ọ bụla, nwee nyocha nke atọ, ihe mkpuchi mkpuchi, wdg. Inye ndị ahịa gị ozi dị mkpa na asambodo ndị ọzọ na nlekota ga-eme ka obi ruo ha ala. Saịtị Ecommerce tinyere asambodo site na isi mmalite Tụkwasịnụ na McAfee NZUZU.
Kedu ụfọdụ ihe ịrịba ama ndị ọzọ na-egosi na ị nwere ike ịtụkwasị ụlọ ọrụ obi site na ọhụhụ Internetntanetị? Kedu ihe ị ga-agbakwunye na nyocha ntụkwasị obi gị?
Tags: ịffeeụ kọfịtụkwasị obinyochaa ntụkwasị obiTRUSTe
Nchoputa ugwo na StumbleUpon Ads
Jan 7, 2013 na 9: 03 AM
Ozugbo m gụrụ mkparịta ụka banyere “© 2009” - ma ọ bụrụ na nke ahụ pụtara na saịtị ahụ adịghị emelite ma ọ bụ na ọ naghị agbanwe ụma iji gosi ụlọ ọrụ nwere oge gara aga. Enwere ọtụtụ echiche mana nke kachasị amasị m bụ ihe atụ © 2009-2012.
Achọrọ m ịgbakwunye na listi ahụ email na-arụ ọrụ na ezigbo Banyere anyị ngalaba dị ka ihe ndị dịkwa mkpa. Ihe ịrịba ama ndị a niile nwere ike ịdị obere ma ọ bụ obere ma kwenye na Douglas ha bụ ihe na-egosi na saịtị ahụ nwere ike ọ gaghị atụkwasị obi. Maka onye mbido dị ka m na webụsaịtị anyị $ earch ọrụ dị ukwuu. Ndị a bụ ọtụtụ nkọwa iji mejuputa iji nweta ọdịdị a pụrụ ịdabere na ya. Anyị họọrọ igosi ihu ụlọ ọrụ anyị na itinye foto anyị. Obi dị m ụtọ mgbe m hụrụ ụzọ a na saịtị ndị ọzọ.